Fidangan’ny faktioran’ny JIRAMA Natsangana ny vovonana handray ireo mpanjifa
Taorian’ny fitarainan’ny olona marobe mikasika ny findangan’ny faktioran’ny JIRAMA raha oharina amin’ny teo aloha dia fantatra fa natsangana eo anivon’ity
orinasa iray ity ny vovonana hihaino sy handray ireo mpanjifa manana olana. Ireo olona miantso ireo tompon’andraikitra mandray ny antso ao amin’ny ivon-toerana miandraikitra ny mpanjifa no miandraikitra izany voalohany ary mandefa ilay mpanjifa any amin’io vovonana io. Misy ny fifampidinihina eo amin’ny roa tonta mandritra izany ka hitondran’ny an-daniny ny maharary azy raha miezaka manazava ihany koa ny an-kilany ao anatin’izany. Tsiahivina moa fa ny laharana 3547 no hahafahana mifandray mivantana amin’ireo tompon’andraikitra misahana ny mpanjifa eo anivon’ny JIRAMA raha toa ka misy ny olana. Ankoatra ny fidangan’ny faktiora dia azo hatao tsara ny miantso azy ireo mikasika ny jiro tapaka na ny rano vaky any amin’ny toerana ahitana izany mba hahafahana mitady vahaolana haingana.